Iziphathimandla zaseMalaysia zacacisa ngesonto eledlule ukuthi kungenzeka ukuthi zaletha amacala ngenhloso yokugcina ukuguqula incwadi kahulumeni enenkontileka. - Amakhodi weBhonasi yeKhasino aku-inthanethi
Izikhathi zokugcina izinkokhelo zemidlalo ezishintshile esizweni zazingo-1998 lapho zanda zisuka ku-22% zaya ku-25%, ngakho-ke ukuvuselelwa kweminyaka engama-20 akunakwenzeka. Noma kunjalo, noma ikuphi ukunwetshwa, uma kwenzeka kwenzeka, ngeke kube yinkinga kwiklabhu yokugembula engaphansi kweyodwa esizweni, njengoba ukukhangisa ngakunye kwentela kungeke kube yinkinga eklabhini yaseMalaysia, kusho abahlaziyi abahlaziyi.
Amafemu amabili okuhlolwa, iMaybank Kim Eng Research neNomura International, bathe ocwaningweni bayalibona leli sonto ukuthi iGenting Malaysia isesimeni esanele sokuthi ukwanda ngeke kuthinte ukukhathazeka kwayo okuyinhloko. Bobabili bagcizelela iqiniso lokuthi imikhakha yebhizinisi ijwayele ukufaka ukwenyuka kwezindleko njengoba bebeka izibalo zabo.
Ngemuva kokuthi izwi liqale ukuzungeza ukuthi ukuhlolwa kungakha, iGenting, esebenza eResorts World Genting eMalaysia, yabona ngokushesha imiphumela emibi. Izimakethe zikhombisile ukuthi isitokwe senhlangano sehle ngo-9% kusukela kuqale u-Okthoba.
i-casino yamalaysia e-intanethi
Izinkokhelo ezikhokhelwa kuqala
Ngasekupheleni kwesikhathi, ikakhulukazi ngenxa yesimo esisemthethweni esingazinzile, ama-voucher akhokhelwa kusenesikhathi abonakale ekhanga kakhulu kubadlali beqembu le-inthanethi lokugembula. Ngesinye isikhathi bekuyi-Paysafecard, kodwa-ke kuvele kwaba yingxenye yomhlangano weSkrill neNETeller. Namuhla, yiNeosurf ephendulwe yaba ukukhetha okuyinhloko kwabadlali beqembu leklabhu abasemawadini lapho imidlalo yokudlala yewebhu ingenalo ivoti elidumile.
Amavawusha akhokhwe kusengaphambili akunikeza ukungafihli, ekupheleni kosuku, uku-100% endaweni evikelekile. Empeleni, igama lakho alicacisiwe kuze kube seqophelweni lapho iphoyinti olidingayo ukuze ukhiphe imali. Manje, kucishe kuqiniseke ukuthi kufanele ubuyele emuva ngokushintshana ngebhange.
I-100 ayikho ibhonasi yediphozi e-Parasino Casino
I-40 yamahhala i-spin casino eThebes Casino
I-60 ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti e-Novibet Casino
I-90 yamahhala e-Planet 7 Casino
I-20 mahhala i-spins ibhonasi ku-Crazy Luck Casino
I-75 ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-Gratorama Casino
I-105 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-RedKings Casino
I-65 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Platinum Play Casino
I-60 yamahhala e-spin bonus ku-Davincis Gold Casino
I-30 yamahhala i-spin bonus ku-Kaboo Casino
I-95 yamahhala e-Cherry Casino
I-55 yamahhala i-spin casino e-UpTown Aces Casino
I-135 ayikho ibhonasi yediphozi e-Sverige Kronan Casino
I-100 mahhala akukho ibhonasi yediphozithi ku-DomGame Casino
I-130 yamahhala i-casino e-Reef Club Casino
I-155 i-spin ibhonasi yamahhala e-Rehab Bingo Casino
I-30 ayikho ibhonasi yediphozi e-Red Star Casino
I-115 ayikho ibhonasi yediphozi ku-Playamo Casino
I-20 ayikho ibhonasi ye-deposit ku-X Casino
Ibhonasi yekhasino yamahhala engu-20 yamahhala eSverigeCasino
I-150 ayikho ibhonasi ye-deposit ku-JenningsBet Casino
I-135 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi e-Blue Lions Casino
I-115 ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti e-Dream Palace Casino
I-45 yamahhala igodla ibhonasi yekhasino ku-77 Jackpot Casino
I-20 yamahhala e-BitCasino.io Casino
1 Izinkokhelo ezikhokhelwa kuqala